nokucekelwa Bayanda asebenzayo imvelo eminyakeni yamuva inani elandayo labantu abaphethwe komzimba. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izingane. Ngu yokungezwani komzimba iyisimo ukungakhululeki, ephelezelwa ukuzwela anda okungafunwa, futhi impendulo ngezinye izikhathi ubuhlungu ezintweni ezihlukahlukene, ngokuthi nomzimba. Abantu abaningi asikubekezeleli ushokoledi, impova, dander isilwane, ezintulini, kumakhemikhali, kuhlanganise ezinye izimonyo.
njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile egeleza amafomu zihlukile, izimpawu zayo kungaba zendawo jikelele. Izimpawu zendawo zihlanganisa lezi ezilandelayo:
conjunctivitis nomzimba, ephelezelwa ezinkulu izinyembezi uketshezi edema samehlo;
rhinitis iguliswa, phakathi kwesikhathi lapho ichichima ekhaleni kanye isikhwehlela ikhishwe;
bronchospasm nge basebenzile 'amakhwela' ukuphefumula;
otitis nomzimba, ephelezelwa edema indlebe kanye nokulahlekelwa ukuzwa;
dermatitis nomzimba, ebonakaliswa isikhumba ububomvu, ukulunywa futhi ukuqubuka.
Endabeni ukubonakaliswa Imininingwane yezimpawu zesifo esithile ungasho ukuthi babe imvelo jikelele: isibonelo, uma kukhona, futhi isikhumba ukuphendula, futhi ukuvuvukala izindlebe namehlo, futhi ecinene. Konke lokhu kungaholela ukushaqeka anaphylactic, okuyinto okuyisimo esisongela ukuphila.
komzimba Phatha kufanele ngokushesha. Ngokushesha xhumana nodokotela wakho ngaphandle izaba, uyokwenza nika ikhambi efanele komzimba. komzimba ngezikhathi, anothi, fluff Poplar, futhi kufanele banganakwa. Yebo, ngokuhamba kwesikhathi, lo yokungezwani komzimba izophela ngokwayo, kodwa ngaso sonke isikhathi.
Ngokuvamile, odokotela linqume iziguli ezine-antihistamine. Futhi batusa ngokugcinwa nokuhlanzeka yokuhlanzeka egumbini ngaphandle ukuhlukunyezwa amakhemikhali. Zama ukunciphisa ukuchayeka izinto ezixabana nomzimba, uma kungenzeka. Ngokuvamile ugeza izingubo zokulala emanzini ashisayo, ifenisha, khetha ngaphandle Upholstery, susa amathoyizi elithambile, ezifuywayo, amatshe. Omatilasi kufanele abe ikhava obukhulu, futhi imicamelo akufanele fluff. Ngokuvamile ukusula uthuli pholisa indlu, ungavumeli umswakama.
Antihistamine yokungezwani komzimba ekuvimbeni histamine receptor. Imiphumela emzimbeni ngenxa H-blocker. Oral N-blocker uqale usebenze emva kwemizuzu 15-30, umphumela sithatha amahora 3-6. Asetshenziswa rhinitis iguliswa, ngezinkathi ezithile zonyaka ethimulisayo, isifuba, conjunctivitis futhi dermatoses. Oral N-blocker ukwelapha yokungezwani komzimba umphumela okulalisayo ebusuku noma kafushane dambisa ukuqwasha abadala, kanye neziguli abasebasha - isicanucanu. Kusho yokungezwani komzimba isinyathelo antihistaminic singasetshenziswa intranasally, noma ngesimo iso amaconsi. Rhinitis ingelashwa nge azelastine, conjunctivitis - usebenzisa emedastina, ketotifen, olopatadina, levocabastine.
Ukwakhiwa - insika iseli stabilizers ukuvimba ukukhululwa kwe balamuli kuzo. Isetshenziswa uma ukwehluleka corticosteroids zendawo antihistamine. Lokhu kungaba nedocromil, cromolyn namafomu amehlo ezifana olopatadin, lodoxamide, pemirolast.
Umenzeli antiinflammatory ngokumelene komzimba ingasatshenziswa ngomlomo noma intranasally. glucocorticoids Oral asetshenziselwa iziyaluyalu ezinzima iguliswa imvelo letindzala okungase ngcono ngokuzimela - ezifana contact dermatitis, isifuba somoya kanye nokuqubuka yezinkathi ezithile al.
Antileukotriene antiallergics aphathe yezinkathi ezithile rhinitis iguliswa kanye somoya ziphikelele awukukhanya.
Ngaphezu kokuhlanganyela yezokwelapha ekulweni komzimba imithi yendabuko ezisetshenziswa kakhulu, okuyinto ethatha e iningi amacala, kuba kubelula futhi kusebenze kahle. Phuza camomile itiye izidakamizwa: Bay 1 tbsp. l. izimbali 1 of Art. amanzi, thumba abilayo at ukushisa low imizuzu 30. Ngemva ukumnika, thatha izikhathi 5-6 ngosuku 1 st. l. Iphinde kusiza decoction of calendulakuva: 10 amagremu izimbali kufanele uthele 1 tbsp. amanzi abilayo, shiya imizuzu 30 futhi baphuze 3-4 izikhathi ngosuku 1 st. l. Anhlobonhlobo Folk remedy iyona nekufakwa ngokulandelana. Nokho, ukwelashwa okunjalo kakhulu nokunwetshiwe - okungenani iminyaka emihlanu, futhi phakathi naleso, esikhundleni netiye isiguli akufanele baphuze fresh umhluzi ngokulandelana, ukwenziwa imizuzu 20-25.
Enye yezindlela ekulweni ukwelashwa komzimba isixazululi nkinga yehadiwe nezinsiza kuyinto yokungezwani komzimba. Kusekelwe isimiso kokuphatha efana nawo afana, okungukuthi, izidakamizwa e kakhulu lo dilution njengoba izimpawu imbangela enempilo. Ukuhlola Amakhambi Okwelapha ufuna ukuqeda zonke izimbangela zokuhlupheka isifo, kunokuba umane aqede izimpawu zaso. It iqeda iguliswa onesimo umzimba, kunciphisa embundwini luvelo izinto ezixabana nomzimba, nokugcina impendulo evamile mzimba.
Ekugcineni kuwufanele kokusho ukuthi, njengoba ukwelapha komzimba ezinganeni. Okokuqala, kubalulekile ukuvikela ingane kusukela ukuchayeka allergen. Nge komzimba ukudla Kufanele ufake ekudleni hypoallergenic. In ekulweni atopic dermatitis ukusiza hormone zendawo wamafutha eqeda ukuvuvukala. Uma ufaka i ukutheleleka, kubalulekile ukungena elwa ne-fungal anti-virus. Antihistamine ukusiza nge izinhlobo ezivamile komzimba. Futhi linqume probiotics, prebiotics kanye enzyme.
A liyinqolobane amavithamini, izakhi trace kanye izinto ezisigcina mzimba - elula dandelion impande.
Izidakamizwa "Chyavanprash": ukubuyekezwa kanye nomphumela ekwelapheni
Yini nokuthi "Cortexin" zohlobo: imfundo
Izimpawu Katherine emdlalweni "The Storm" A. N. Ostrovskogo
Igama elisha ku umhlobiso: usimende Usilika Usilika Khonka